ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): တစ်ကိုယ်စာ ပြောင်းရင် (သို့) ဖိနပ် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
တစ်ကိုယ်စာ ပြောင်းရင် (သို့) ဖိနပ် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ ရုပ်ဖျက်ပြီး သူ့တိုင်းပြည် တခွင် လှည့်လည်သွားလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ လှည့်လည် ကြည့်ရှုပြီးလို့ ဘုရင်ကြီး သူ့ရဲ့ နန်းတော်ကို ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ခြေထောက်တွေ အရမ်းနာနေခဲ့တယ်။
လမ်းတလျှောက် မှာ ရှိတဲ့ ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲတွေကြောင့် သူ့ခြေထောက် နာရပါတယ် ဆိုပြီးတော့ တတိုင်းပြည်လုံး ရှိရှိသမျှလမ်းတွေကို နွားသားရေ တွေနဲ့ ခင်းရမယ် လို့ အမိန့်ထုတ် လိုက်တယ်။
ဒီလိုသာ ခင်းမယ်ဆိုရင် နွားအကောင်ရေ အမြောက်အများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးတော့ မှာကို မြင်ပေမယ့် အမတ်တွေက ပိုကောင်းတဲ့ အကြံ မထုတ်နိုင်တာက တစ်ကြောင်း၊ ဘုရင့် အမျက်တော်ရှမှာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ဘယ်သူမှ မပြောဝံ့ကြဘူး။
ဒါပေမယ့် ခပ်ဝေးဝေး တစ်နေရာက အမတ်ငယ် တစ်ယောက်ကတော့ မကြောက်မရွံ့ထပြီးတော့ ဘုရင်ကြီးကို အကြံပြုလိုက်တယ်။
အရှင်မင်းကြီးဘုရား . . . မလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို ဘာ့ကြောင့် ငွေ အကုန်အကျခံပြီးတော့ လုပ်နေတော့ မှာလဲ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးစာ နွားသားရေကို သုံးတာထက် သင့် ခြေ နှစ်ဖဝါးစာ နွားသားရေကို ပဲ လှီးယူလို့ ဆင်မြန်းရင် ပိုမသင့်တော် ပေဘူးလား . . . ။
ဒီတော့မှ ဘုရင်ကြီးက ဉာဏ်ရှိတဲ့ အမတ်ငယ်ကို ချီးမွမ်းပြီးတော့ အမတ်ငယ်ရဲ့ အကြံ ကို လက်ခံခဲ့တယ်။
ဒီပုံပြင်လေးက ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဖိနပ် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကြောင်း ညအိပ်ယာဝင် ပုံပြင်လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ပုံပြင်ရဲ့ ပေးလိုတဲ့ အသိက အတော်နက်တယ်။
လောကကြီး သာယာဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်စရာ မလိုပါဘူး။ အရမ်း များလွန်း လှပါတယ်။ မိမိ တစ်ကိုယ်စာ စိတ်ထားလေးတွေ ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။
မူရင်းစာစုမှာ မပါပေမယ့် ဒီပုံပြင်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သင်ယူလို့ ရတာ နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ပညာဆိုတာ ရာထူး ဂုဏ်သိန်၊ အသက်အရွယ်၊ နေရာဌာန တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျ မနေတတ်ပါဘူး ဆိုတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ရှင်ဘုရင်လုပ်သူရဲ့ အဆင်ခြင်နည်းတဲ့ အမိန့်ကို တွေ့ရသလို နေရာကောင်း မရတဲ့၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ချီးမြှောက် မခံရတဲ့ အမတ်ငယ်လေးရဲ့ အကြံတစ်ခုက သတ္တဝါပေါင်းများစွာ အသက်ချမ်းသာရာ ရစေသလို၊ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရဲ့ အစလည်း ဖြစ်စေခဲ့တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမတ်လေးဟာလည်း ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့် ခဲ့ပါတယ်။
- မှတ်စုကြမ်း ‪#kyawnge
Posted by Zaw Nyein Aye at Thursday, February 18, 2016
ဗိုက်တာမင် ဒီ နှင့် သင့် ကျန်းမာရေး Vitamin D and your health
ပါရာစီတမောလ် ဆေးလွန်ခြင်း မဖြစ်အောင်
အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ဉာဏ်ရှိစွာ တွဲဖက်စား Beware of Interactions between Drugs and Food products